Momba anay - Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd.
Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2008, birao any Shanghai, orinasa any Yuyao, Faritanin'i Zhejiang, miaraka amina fitaterana mety mankany Shanghai sy seranan-tsambo Ningbo Orinasa matihanina mirotsaka amina fonosana plastika mahazatra sy namboarina izahay, toy ny sprayer, pumps, sprayer mist, tavoahangy plastika ary vahaolana feno fonosana tsara ho an'ny fivarotana lehibe, indostrian'ny fikarakarana hoditra, salon fanaovana makiazy, mpaninjara, mpivarotra ambongadiny manerana an'izao tontolo izao. Manome kalitao avo kokoa izahay, vokatra OEM & ODM avo lenta miaraka amin'ny vidiny mirary.
Rainbow Package dia manana mpanjifa mahatoky maro, maro avy amin'ny tsena Amerikanina, Kanada, Eropa, Oceania ary Azia Atsinanana. Miaraka amin'ny vokatra manondrana lafo vidy, vokatra avo lenta, serivisy tsara indrindra, amin'ny fandefasana ara-potoana, azonay antoka fa afaka mahafeno ny fepetra takianay rehetra izahay ary mihoatra ny andrasanao.
Manana ekipa matihanina R&D matihanina isika, afaka mamolavola tsy miankina ary mamokatra lasitra anay. Ny ekipanay dia nanampy ny mpanjifa amin'ny firenena maro hahatsapa ny fizotrany hatramin'ny hevitra ka hatramin'ny vokatra tena izy.
Rainbow Package dia manana ekipa tanora, matihanina ary mavitrika, natokana hanomezana vahaolana vahaolana fonosana iray tokan-tena amin'ny mpanjifa tsirairay. Ary manatsara hatrany ny fizotry ny fifandraisana mba hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa.
Ny entana dia nandalo tamin'ny alàlan'ny fanamarinana mari-pahaizana nasionaly ary noraisina tsara tao amin'ny orinasa lehibe. Ny ekipanay injeniera manam-pahaizana dia matetika vonona hanompo anao amin'ny fifampidinihana sy hevitra. Afaka nanatitra anao koa izahay tamin'ny santionany tsy andoavam-bola hihaonana amin'ny specs-nao. Ny ezaka mety dia hamboarina hanomezana anao ny serivisy sy vahaolana mahasoa indrindra. Raha tena liana amin'ny orinasanay sy ny vahaolana ianao dia mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka aminay na miantso anay avy hatrany. Ho afaka hahafantatra ny vahaolana sy ny orinasanay. Ar more, ho azonao atao ny manatona ny orinasanay hijery azy.